Erataria Oo ka Hadashay Shirka Soomaaalida Uga Socda Kenya.
Ergayga dowladda Erataria wakiilka uga ah arrimaha dib u heshiisiinta Soomaalida Mr Yohaness Berhe ayaa sheegaya in dowladiisu ay daneyneyso in natiijo ay ka soo baxdo kulamada imminka ka socda magaalada Nairobi oo ay leeyihiin madaxda kooxaha Soomaalida.
Danjiraha Erataria u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in xiriir wanaagsan ay la leeyihiin shacabka Soomaaliyeed mar aan waraysi la yeeshay dhowaan, waxaana uu sheegay in dawladiisu ay danaynayso dowlad ka dhalata Soomaaliya.
"Waxaan dooneynaa in mustaqbalka dhow aan aragno Soomaaliya oo midowday, anaguna waxaa ka taagannahay shirka Soomaalida meel dhex dhexaad ah, mana dooneyno dano gaar ah aan wadano" ayuu yiri danjiraha Erataria wakiilka uga ah arrimaha dib u heshiisiinta Soomaalida danjire Yohaness.
Safiirka ayaa sheegay in arrinta Soomaaliya ay tahay xilligan mid muhiim u ah guud ahaan gobalka oo idil isagoo sheegay xasilooni la'aanta ka jirta dalka Soomaaliya ay dareemayaan urur gobaleedka IGAD taasina ay tahay waxa ay Erataria u dooneyso xilligan inay ka qaadato kaalinta ay ku leedahay nabad ka dhalata Soomaaliya.
Erataria waxay ku soo biireen wadahadalada Soomaalida kulankii ay yeesheen madaxweynayaasha urur gobaleed IGAD oo sanadkii hore ka dhacay kampala, waxeyna Erataria ay aad ugu dhexjirtay xilligaas wixii ka dambeeyay arrimaha Soomaalida.
Safiirka wuxuu kaloo sheegay in ay jiraan faragelin ka imaaneyso dowladaha darriska qaarkood iyo dowlada kale taasi oo uu sheegay inaysan wanaagsaneyn
Waraysiga safiirka Erataria waxaa uu ku soo beegmay xiligan iyadoo dawladda Itoobiya aysan ka dhex muuqan shirka soomaalida tan iyo intii lagu dhawaaqay gudiga fududaynta ee urur goboleedka IGAD.
QORAALADII HORE EE RIDWAAN